လူလတ် ပိုင်း နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အွန်လိုင်း စိတ်ဝင်စားမှု အသိုင်းအဝိုင်း Hongsong သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုနှင့် ငွေကြေး ၁၀၀ ရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
Jan 05, 2022, 18:00ညနေ 2022/01/07 23:06:14 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင်တရုတ် လူလတ် ပိုင်း နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အွန်လိုင်း စိတ်ဝင်စားမှု အသိုင်းအဝိုင်း Hongsong က ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်းသည် မကြာသေးမီက ယွမ်သန်း ၁၀၀ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်. BAI Capital သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဦး ဆောင် သူဖြစ်ပြီး ယခင် ရှယ်ယာရှင် များဖြစ်သော Matrix Partners ၊ Genesis Partners Capital CCV နှင့် Lanchi Ventures တို့ လည်းပါ ၀ င်သည်။ Hongsong သည် ဖောက်သည်များအား ပိုမိုကောင်းမွန် စေရန် ကုန်ပစ္စည်း သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စျေးကွက် ချဲ့ထွင် မှုအတွက် ရန်ပုံငွေ များကိုအသုံးပြု လိမ့်မည်။
Hongsong သည်တရုတ် အငြိမ်းစား များ ကိုအာရုံစိုက် ပြီး အသံ၊ ဂီတ တူရိယာ များ၊ စာလုံး အလှ ရေး နည်း၊ ပန်းချီ ၊ အ က၊ ရွတ်ဆို ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ နံပါတ် များ၊ အင်္ဂလိပ် ၊။
Hongsong သည် နိုင်ငံတစ် ဝှမ်း ရှိ ဆရာ များကို ပေါင်းစည်း ရန် အင်တာနက် အရင်းအမြစ် များကိုအသုံးပြုသည်။ သို့မှသာ အငြိမ်းစား များသည် အွန်လိုင်း တွင် သင်ယူ နိုင် ရုံသာမက နိုင်ငံတစ် ဝှမ်း မှ စိတ်တူ သူငယ်ချင်း များ ဖွဲ့ နိုင်ပြီး ဤ ပလက်ဖောင်း မှတစ်ဆင့် ဆက်ဆံရေး အသစ် များတည်ဆောက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာ ၏ လူကြိုက်များ မှုနှင့်အတူ Pinus koraiensis သည် အငြိမ်းစား ၁၀ သန်း ကျော်ကို အစေခံ ခဲ့ပြီး ဆက်လက် တိုးတက် နေသည်။
ဟောင်ကောင် ထင်းရှူး ကိုတည်ထောင် သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Li Qiao က ဟောင်ကောင် ထင်းရှူး သည် လူလတ် ပိုင်း နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပညာ ရေးအတွက် သာ ပလက်ဖောင်း အဖြစ်သတ်မှတ် ရန် ငြင်းဆန် ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အဲဒီ အစား, ကုမ္ပဏီ ကလူ သူတို့ရဲ့ အသက်အရွယ် အုပ်စု အတွက် အလားတူ အကျိုးစီးပွား နှင့်အတူ မိတ်ဆွေဖွဲ့ ကူညီ ဖို့ ကတိက ဝတ်ပြု ထားသည်။ Pinus koraiensis သည် ဆက်ဆံရေး ကွင်းဆက် ပလက်ဖောင်း အသစ်တစ်ခု ကိုတည်ဆောက် ရန်နှင့် ငယ်ရွယ်သော မျိုးဆက် များ ၏အလုပ် နှင့် လေ့လာ မှုတွင် သက်ကြီးရွယ်အို အချို့ ခံစား ရသော အထီးကျန် မှု ကိုဖြေရှင်း ရန်ကူညီ ရန်မျှော်လင့် သည်။
Bai Capital ၏ တည်ထောင်သူ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု မိတ်ဖက် Yu Long ကလူ ဦး ရေအ ပြောင်းအလဲ များကြောင့် လာမည့် ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း လူအများ အပြား အနားယူ မည်ဖြစ်ပြီး မျိုးဆက်သစ် လူလတ် ပိုင်း နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သည်သူတို့၏ ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ဘဝ အရည်အသွေး အတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များ ရှိ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့မှာ အသုံးစရိတ် ပို များပြီး အချိန်ပို ရလ ိမ့် မယ်။ ထို့ကြောင့် ဤ လူ ဦး ရေ ပြောင်းလဲမှု အသစ် တွင် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း များစွာ ရှိလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး Tencent သည် သက်ကြီးရွယ်အို များနှင့် ကျေးလက် စားသုံး သူများ ကိုဆွဲ ဆော င်ရန် ဗီဒီယို ပလက်ဖောင်း အသစ် ကိုစတင် ခဲ့သည်
အမျိုးသား စာရင်းအင်း ဗျူရို ၏အဆိုအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင်အသက် ၆၀ ကျော် သောလူ ဦး ရေသည် သန်း ၂၆၀ ကျော် ပြီး စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ၏ ၁၈. ၇% ရှိသည်။ ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် သန်း ၃၀၀ ကျော် နိုင်သည်။ တရုတ် လူ ဦး ရေ အိုမင်း လာ ခြင်းနှင့် လူလတ် ပိုင်း နှင့် သက်ကြီးရွယ်အို များ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာ လိုအပ်ချက်များ မြင့်တက်လာ ခြင်းနှင့်အတူ အွန်လိုင်း မှ အငြိမ်းစားယူ သူ အရေအတွက် များပြား လာသည်။
တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ DeepMirror သည် မကြာသေးမီက ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ တန် သော ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
Startups Feb 09 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 9, 2022